संघदेखि प्रदेश सरकारसम्मले बजेट खर्च गर्न सकेनन् - TodayKhabar
काठमाडौं । बजेट खर्च गर्नका लागि तीन वटै सरकारहरु असफल भएका छन् । संघीय सरकारले १२ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुको अवस्था पनि उस्तैछ । ७ वटा प्रदेश सरकारको अर्धवार्षिक अवधिसम्मको बजेट खर्च मात्रै १४ प्रतिशत छ । यसले समग्र बजेट प्रणाली नै कमजोर बनाएको छ ।
प्रदेश सरकारका बजेट निर्माणको दोस्रो बजेट आइसक्दा समेत अझै खर्च प्रणालीमा सुधार गर्न सकेका छैनन् । ७ वटा प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ खर्ब ५९ अर्ब २८ करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेका थिए । त्यसमध्ये अर्धवार्षिक अवधिसम्म कूल खर्च १४ प्रतिशत मात्र छ । सबैभन्दा बढी ५० अर्ब बराबरको बजेट ल्याएको वागमती प्रदेशको बजेट खर्च ९ दशमलव १० प्रतिशत मात्रै छ । यसमध्ये विकास खर्च मात्रै ८ दशमलव शून्य ८ प्रतिशत छ ।
कर्णाली प्रदेशको विकास खर्च २ प्रतिशत छ । सबैभन्दा बढी विकास खर्च गर्ने प्रदेश नम्बर एक हो । यसले १९ दशमलव ३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।
कुन प्रदेशको कति खर्च ?
अझ, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतको दायरा साघुँरिएका बेला केन्द्रबाट गएको अनुदान रकमको समेत सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । प्रदेश सरकारले केन्द्रले मुठी कसेको बताईरहदा विकास आयोजनामा पठाएको अनुदान रकम अन्यत्र खर्च गर्न खोजेपछि ४० अर्ब अनुदान फिर्ता गरेको महालेखा नियन्त्रकको तथ्यांकले देखाउछ । जानकारहरु योजनागत छलफल गरी काम नगर्दा खर्च र काम नदेखेको बताउँछन् ।
केन्द्रदेखि स्थानीय तह सम्मको खर्च प्रणाली कमजोर हुँदा अर्थतन्त्रमा नै धक्का लागेको छ । अझ, खुसी जनता समृद्ध प्रदेश बनाउने प्रदेश सरकारहरुको दिर्घकालिन योजनामाथि बजेट खर्चको तथ्यांकले गिज्याइरहेको छ ।
महरालाई जेल हाल्नुको यर्थात बाहिरियोः डा. केसीले खुलाए जेल हाल्नुको वास्तविकता (भिडियो सहित)
सन् २०२० को पहिलो महिना ६६ हजार पर्यटक मात्र नेपाल भित्रिए
शवलाई समेत बलात्कार गर्छन् तालिवान लडाकु